နည်းနည်းလျှော့ကြပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » နည်းနည်းလျှော့ကြပါ…
Posted by kai on Dec 18, 2011 in Editor's Notes | 49 comments
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသောမိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်။
ကျွန်မ ပြည်သူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံ ပါရစေ။ ကျွန်မတို့နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတ္တိရှိရှိ ပြောဆို ဆက်ဆံကြပါ။ ကျွန်မတို့ကို ဟိုဟာ ပြောရကောင်းလား၊ ဒီဟာ ပြောရ ကောင်းလားဆိုပြီး။ ကျွန်မတို့ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ ပြောစရာရှိတာကို ပြောပါ။ သဘောမတူ လို့ရှိရင် သဘော မတူဘူး ဆိုတာကိုတော့ ပြန်ပြောမှာပါ။ ဒါကတော့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံလေ။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ဆဲဆိုပိုင်ခွင့်နဲ့ မတူဘူးလေ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ကြိမ်းမောင်း တာလေးတော့ ပါချင်ပါမှာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်အောင် ပြောဆိုဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဖို့ အတွက်ကတော့ ကျွန်မတို့ လေ့ကျင့်ယူရ ပါမယ်။ လေ့ကျင့်ယူရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့ ပိုပြီး တတ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ်တစ်ခါတစ်လေတော့ ဆဲ မိပါတယ်တဂျီး
ပုထုဇဉ်ကို တဂျီး ရဲ့
ဒီတစ်လော ပို့စ်တော်တော်များများမှာပေါ့ ပါဌိ လိုတွေများနေတာတော့
ပုထုဇဉ်ဆိုတာ ဥမ္မတကကို ပြောတာ၊ ဥမ္မတကဆိုတာ အရူးပဲ၊ အေးလေ၊ အရူးဆိုတော့လည်း ငိုချင်ငို၊ ရီချင်ရီ၊ ဆဲချင်ဆဲမှာပေါ့။ ဒီရောဂါက ထုတ်ပြောနေရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်သိရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပျောက်အော်ကုရမှာ ကိုဘီလူးရဲ့။ ပုထုဇဉ် ပုထုဇဉ် ဆိုပြီး မဟုတ်တာပြောခွင့် ပါမစ်ယူထားမှာဆိုးလို့ပါ။
ဒီမယ်ဗျ.. ပုထုစင် ဆိုတာ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကိုပြောတာ
ပုပုလေးနဲ့ ထုလိုက်ရင် စင်သွားတာ။ (ကျုပ်နားလည်တာ ပြန်ရှင်းပြဒါ)
အများပိုင်ပစ္စည်းက်ို ၊ ကိုယ့်ကိုင်ပိုင်အလားမှတ်ယူကာ..
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ သဂျီးရာ ..
နဲနဲ ဝင်ထိမ်းပေးတဲ့အတွက်ပါ ..
နို့မဟုတ်ရင် တချို့လဲ ကိုယ့်မျက်ချေး ကိုယ် မမြင်နိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်နေကြပါပီ ..
မကျေနပ်မှုရှိရင်လဲ မကျေနပ်သလို လွတ်လပ်စွာ အော်ကြမှာ ..
သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား စနစ် က အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ် ..
ကိုယ်ကြိုက်ရင်ဝင်ဖတ် မကြိုက်ရင် လစ် နောက်သတင်းတခု ဖတ် . .
သိပ်ဆိုးဝါးနေတဲ့ ( အပျက်သဘော ဆောင်) comment တွေတက်လာရင် ဖယ်ရှားပေးနိုင်သူတွေက
ဖယ်ရှားပေးစေလိုပါတယ် .. ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရင်ဖြင့် ဂဇက်ကြီး သာယာလှပသွားမှာပါ ။
( အရေးယူရာမှာ အကြီးတန်း ၊ အငယ်တန်း မခွဲခြားစေလိုပါ ၊ ဗဟုသုတ အရာ ၊ အရေးအသားပညာ
တွေ ကွာခြားလွန်းလှပေမဲ့ ထမင်း ၂ နပ်စားသော ပုခုံးပေါ် ခေါင်းရှိသည့် လူ ခြင်း အတူတူသာလျှင်
ဆြာခိုင်ရေ အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်ဗျို…စာရေးခြင်းကအနုပညာပါ…စာရေးသူဆိုတာ အနုပညာရှင်ပါပဲ…စကားလုံးလှလှလေးတွေသုံးပြီး…ကိုယ်လိုချင်တာ …သိစေချင်တာကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ…
ဆရာကိုသစ်မင်းရေးဖူးသလို..ဂေဇတ်ရွာထဲက စာပေါင်းစုံကို ဟင်းပေါင်းစုံလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်..
စားမကောင်း အရသာမရှိတဲ့ဟင်းပွဲကတော့ စားမဲ့သူမရှိရင် အလိုလို ပုပ်သိုးသွားမှာပဲလေ..
ကျွန်တော်တို့တွေ အနေ နဲ့အရသာမရှိတဲ့ ဟင်းပွဲအကြောင်းဝိုင်းပြောနေကြရင်
ဟင်းကောင်းတွေ ကိုမြည်းဖို့ လက်လွတ်သွားမှာ စိုးရတယ်..
ပြီးတော့ သူ့ဟင်းအတွက် အာရုံများနေတာနဲ့ ကိုယ့်ဟင်းက အရသာပျက်ကုန်ရင်အခက်ဗျ.
ဒီတော့ ကိုယ့်ဟင်းလေးတွေပဲ ကောင်းအောင်ချက်ကြတာပေါ့ နော..
ဒါနဲ့ ကိုယ်တွေ မကြိုက်ဘူးပြောထားတဲ့ဟင်းကို စားပွဲပေါ်ထပ်တင်လာခဲ့ရင်တော့ ပန်းကန်ပါကိုင်ပေါက်ခွဲ ပစ်လိုက်ဗျာ..
ဘာအခုမှ ကြောက်ပါဘီလဲ….သာသနာဖျက် အကုသိုလ် ငရဲဂျိုးကပ် အဓမ္မရုပ်ဝါဒီ စစ်တပ်သူလျှို စီအိုင်အေသတင်းပေး တရုတ်လက်ပါးစေ ဂျာပွန်ဇိမ်ဖုံးဂျီးလူထွက် သဂျီးကို ဝိုင်းဆဲဂျကွာ…..။ ရန်သူတိုက်စစ်ဆိုရင် ကိုယ်က ခံစစ်ပြင်ရဒယ်။ အခု ရန်သူသဂျီး ခံစစ်ဖြစ်နေပြီ ဝိုင်းထိုးဂျ။ ဘာနဲ့ထိုးမလဲ… ဟုတ်စ …….ဓါးရှိရင် ဓါးနဲ့ထိုး၊ လှံရှိရင် လှံနဲ့ထိုး၊ ဒုတ်ရှိရင် ဒုတ်နဲ့ထိုး၊ ဘာမှမရှိသူများ ခြေ လက်နဲ့ထိုး၊ ကိုယ် ဦးခေါင်းနဲ့တိုက်၊ အဲဒါတွေတခုမှ မအားရင် အတက်ဖြစ်ရင်ပြီးရော ဝင်သာထိုးဂျ…… ကျား…..တက်…..ထိုး….. :mad:
ကြောင် ကြောင် ကြောင်လွန်းတယ်၊ ကြောင်လွန်းတယ်၊ ကြောင်လွန်းတယ်လေး – – – – ကြောင်လွန်းတယ်လေ။ အလိုဗျာ – – – ကြောင်လှပါလား – – – – – – – ကွယ်။ (သံစဉ် ထည့်ဆိုပါရန်)
သဂျီး ကိုင်တွယ်ပုံ အများကြီး လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ် လို့ 
အကောင့်သစ် တစ်ခု လုပ်ပြီး
ခပ်တည်တည် နဲ့ 
ဆိုက်ထဲက လူအားလုံး ကို ဆဲတဲ့ ပို့ စ် တင်ရင်လည်း
ဒီတော့ ပို့ စ်တင်တဲ့ ကိစ္စ ကို ၊ တင်ချင်သလို တင် ဆိုရင်တော့
ဆဲတဲ့ ကိစ္စ က ဘယ်တော့မှ မျိုးတုံးမယ် လို့ မထင်ဘူးဗျို့ 
သဂျီးအကိုင်အတွယ် ကောင်းမကောင်း မပြောတတ်ဘူး၊ ရွာသူားဖြိုးကတော့ အယားတောင်မပြေလို့ ကိုအောင်ဘုခေါ် သုံးရတယ် ကြားတယ်။။
ရွာသားများ ပါဝင်ဆွေးနွေးရာတွင် အထောက်အကူရစေချင်၍ဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကျုပ် နဲ့ ဇာဒူးကြီး နဲ့ပို့ စ်တင်တဲ့ ကိစ္စ ကို
သဂျီးအရင်ဖတ်ပြီးမှ တင်ခွင့် ပြုမပြု လို့ ဆိုကြတော့
သဂျီးက အားလုံးကို မဖတ်ဖြစ်မှာ အသေချာဘဲ မို့ 
ဘာလိုလိုနဲ့ ရွာ့လူမိုက် ဖြစ်နေပါပေါ့လား …
ကျုပ်ကပဲ စ ပီး လျော့လိုက်ပါတယ်…
အကုန်လျှော့လိုက်ပီ ဗျို့ ….
အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင် တွေအပါအ၀င် လူပေါင်းစုံ အလွှာပေါင်းစုံ ရှိနေတဲ့ဂေဇက်ရွာကြီးထဲမှာ စရိုက်ပေါင်းစုံ
တွေ့နေရတာကတော့ သိပ်မဆန်းပါဘူး.. ဒါပေမယ့်..၀င်ရောက်ရေးသားသူတွေအနေနဲ့ သတိထားသင့်တာလေးတစ်ခု
က ကိုယ်တင်တဲ့ပို့စ်တစ်ခုဟာစာဖတ်သူအများပြည်သူကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းပြီးတိုက်ခိုက်သလိုမဖြစ်ဖို့လိုသလို
ဖြစ်စေမယ့် လမ်းလွဲပို့စ်မျိုးမဖြစ်စေဖို့လိုပါတယ်..တစ်ဖက်သားကိုလေးစားတတ်တဲ့စိတ်အခံရှိသူတွေဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို
မန်းဂေဇက်ဆိုတာမည်သူမဆိုဝင်ရောက်လေ့လာဖတ်ရှု့နိုင်တဲ့ မြန်မာဆိုက် တစ်ခုဖြစ်လို့ ၀င်ရောက်ရေးသားနေကြသူတွေသာ
ကဲ…ဒီလိုအင်တာနက်ထဲက သဂျီရဲ့မြန်မာရွာသေးသေးလေးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေတောင်
ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓါတ်လေးတွေ မမွေးမြူနိုင်ကြရင်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလေးတွေ မကျင့်သုံး
နိုင်ကြရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ရွှေပြည်တော်မျှော်လေတိုင်းဝေး
သဂျီးရဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေကို ဆက်စပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နည်းနည်းလျှော့ကြပါ။ များများလျှော့လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
မှာ ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ မီးတောက်များအကြောင်း..( အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ ) ပို့ စ်ကို
ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး အမျိုးသမီးများပါ..ဖတ်လို့ ရအောင် ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများကို ရှောင်ပြီး.ရေးခဲ့ပါတယ် ။
ခေါင်းစဉ်အရ အမျိုးသမီး မဖတ်ရလို့ ရေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် (အမျိုးသားများဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် ရေးလိုက်ပေမယ့်) အမျိုးသမိးများလည်း သေချာပေါက် ၀င်ဖတ်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ် ။
ဒါကြောင်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ…အရေးအသားများ နည်းအောင်…စကားလုံး မကြမ်းအောင် ရေးထားပါတယ် ။ ဖတ်ကြည့်ရင် သိပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒါပေမယ့် comment ပေးသူများထဲမှာ…
nigimi77 ဆိုသူ ရေးသွားတဲ့comment တစ်ခုကတော့ တော်တော် အခြေအနေဆိုးနေပါတယ် ။
အဲဒီ စကားလုံးတွေကို သူရေးသွားရဲ..ပေမယ့် ကျွန်တော် တောင် မဖတ်ရဲ..ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေဆိုတော်တော်..ရှက်မှာပါ ။
ကျွန်တော်လည်း…အပြာပို့ ရေးတဲ့ သူ လိူုလို ဖြစ်သွားတော့မယ် ။
ကျွန်တော်က နူညံ့တဲ့ စာပေသမားပဲ.ဖြစ်ချင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အဲဒီ ကွန်မန်း ကို ဖျက်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်…ဘယ်လို ဖျက်ရမယ်။။မသိလို့ ပါခင်ဗျ။
အလင်းစက် ခည ။
ကျုပ်ရေးတဲ့ ကွန်မန့် ကို ဖတ်ပြီး အများအမြင်မှာ အတော် ဆိုးဝါးနေတယ်လို့ 
မြင်ရင် ၊ ဖျက်သင့်တယ် ထင်ရင် ကန့် ကွက်စရာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူး
မရှိပါဘူး ။ သို့ သော်လည်း ကျုပ် အနေနဲ့ပြောခွင့်ရှိတာတော့ ပြောချင်တယ် ။
ပထမဆုံး အချက်ကတော့ ခင်ဗျားက (အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ) ဆိုပြီး ထင်သာမြင်သာ
အောင် ရေးလိုက်ကတည်းက အမျိုးသမီးများ ဖတ်၏ မဖတ်၏ ဆိုသည့် အချက်ကို
ခင်ဗျား အနေနဲ့အထူးတလည် ဂရုပြုတာကို စကားလုံး ခပ်ကြီးကြီး နဲ့ ပြောရရင်
စိတ်ပညာ သဘောအရ မြင်နိုင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ။
ဒါဟာ လိင်ခွဲခြားမှုဝါဒကို နှစ်သက်တဲ့ အစွန်းရောက်တွေ ပြောနေကြ စကားလုံးမျိုးပါ ။
“..အဲဒီ စကားလုံးတွေကို သူရေးသွားရဲ..ပေမယ့် ကျွန်တော် တောင် မဖတ်ရဲ..ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေဆိုတော်တော်..ရှက်မှာပါ ။
ကျုပ်ရေးသွားတဲ့ စကားလုံးတွေက ခင်ဗျား တင်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာထက် ပိုပြီး
အပြာဆန်နေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါက ခင်ဗျား NC 17 အကြောင်းပြောနေခိုက်မှာ ကျုပ်က
တာဘူးတွေက ပို မဆိုးဘူးလားလို့မေးခွန်းထုတ်လိုက် သလိုပါပဲ ။
လူ အများ ဖတ်ရှုနေတဲ့ Site တခုမှာ ခင်ဗျားက အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရလို့ပြောလိုက်
ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ ၀င်ကြည့်ပါ ဖတ်ကြည့်ပါ ဆိုပြီး ဒီလို အကြောင်းအရာတွေနဲ့ 
လူတွေကို အတွေးအခေါ် ယိမ်းယိုင်မှုကို ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်တယ် ဆိုတာဟာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့ တွေ မနေ့ က ချီး ဘယ်နှတုံး ပါခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြောကြမလား ဒါမှ မဟုတ်
ဒီနေ့ ချီး ဘယ်နှတုံး ပါမယ် ဆိုတာကို ပြောကြမလားဆိုတာက ခင်ဗျားလို ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့
အသိညဏ်ရှိတဲ့ စာပေသမား ကဗျာသမား တစ်ယောက် အတွက် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်ပါ ။
လူငယ်တွေ အနေနဲ့အရင်က ထီးဖြူဆောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို မစားရ ၀ခမန်းပြောမလား ။
ဒီနေ့ ထီးဖြူဆောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာက ပိုပြီး အဓိကကျနိုင်ပါတယ် ။
သဘောတရားက အတူတူပဲဖြစ်လို့ကျန်တာတော့ ကိုယ် ညဏ်မှီသလောက် တွေးကြည့်ပါ ။
ဆိုတော့….ခင်ဗျား မဖတ်ရဲဘူး ဆိုတဲ့ စာတွေက ကျုပ်တောင် ဘယ်တုန်းကမှ မရေးရဲပါဘူး။
နူးညံ့တဲ့ စာပေသမား တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် အပြာဆန်တဲ့ မနေ့ က ချီး ဘယ်နှတုံး
ပါခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးကို မရေးဖို့အကြံညဏ် ပေးလိုပါတယ် ။
သင်ကောင်းလျင် ကျွန်ုပ် မဆိုးပါ ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ လမ်းကို ပြန်ကြည်တတ်သူလား ရှေ့ လျှောက်မဲ့ လမ်းကို ရွေးချယ်တတ်သူလား
ဆိုတာကတော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ပြန်သုံးသပ်ရမှာပါ ။
ကျွန်တော်လည်း…အပြာပိုစ့် ရေးတဲ့ သူ လိူုလို ဖြစ်သွားတော့မယ် ။
အမှန်က ရွာသက်ရင့်သူတွေ (သဘာတွေ)က ထိန်းသိမ်းပေးရမှာ
ခုတော့ သူတို့ကပါ ကျည်ကာဝတ်စုံ (စီနီယာ) အပြည့်နဲ့ ဗုံးကျဲချနေတာ
အဲလိုတော့ အားလုံးသိမ်းကျုံးမပြောပါနဲ့ စနိုးလေးရယ်.. ကိုကိုရှူံးတို့က ကွန်ကရစ်ဘန်ကာထဲကနေ လက်နက်ကြီးပစ်ကူလောက်ပဲပေးတာပါ။ မယုံရင် သေချာလာကြည့်၊ ဘာကြည်ကာမှ မ၀တ်ထားဘူး။ ဟိုဘက်က ပြန်ပစ်တာ မှန်ချင်လဲ မှန်ပစေဆိုပြီး ၁၆၀ မမ အမြှောက်ဆံတွေပဲ ပြောင်းထဲ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထည့်ပြီး ပစ်ထောက်ကူလုပ်နေတာပါနော်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အနီးကပ် ဘဇူကာလောက်နဲ့ပဲ ပစ်မိတာရှိပါတယ်။ ပဲ့ထိန်းဒုံးတွေနဲ့လဲ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဆော်မိသပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ အဲဒီထဲမှာ ကိုရင်ရှူံး မပါပါဘူးလို့။
နည်းနည်း မဟုတ်ပါဘူး ….။ အများကြီးလျော့ထားပါလေရဲ့…။ ဒါပေမဲ့…. တစ်ချို့တွေ တင်လာတဲ့ ပို့စ်တွေက တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထိခိုက်စေရုံမဟုတ်ပဲ အများကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းတဲ့ ပို့တွေပါပါလာပါတယ်…။ ပို့တင်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ စဉ်းစားသင့်တာက ဒီအကြောင်းတင်လိုက်လို့ ဘယ်လို အသံတွေ မှတ်ချက်တွေ ထွက်လာနိုင်မလဲ အရင် တွက်ဆကြည့်ကြစေလိုပါတယ်…။ ခုတော့ ပို့စ် တစ်ခုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်လို့ ရလွယ်နေတော့ ပြောရပြီးရော… ပို့စ်ဖြစ်ရင် ပြီးရော လက်လွှတ်စံပယ် တင်နေတာတွေ တွေ့နေရတယ် …။ ဒါ ဘယ်သူဘက်မှ လိုက်ပြီး ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး….။ ကိုယ်က ကိုယ် ရေးချင်တာရေးတင်ခွင့် ရှိနေသလို တစ်ဘက်က ဖတ်တဲ့သူက လည်း မှတ်ချက်ရေးခွင့် ပြန်လည် တုန့်ပြန်ရေးခွင့် ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်း သတိထားကြပါဦး …။ လက်လွှတ်စပယ်ရေးနေတဲ့တဲ့ သူတွေကိုပြောတာပါ…။ တစ်ခါတစ်ခါ မဖတ်ချင်ကျော်သွားလို့ရတာမျိုး ရှိပါတယ်…။ ကျွန်တော်ချေပလိုက်တဲ့ ပို့စ်က ပထမ တစ်ရက် ပျောက်သွားပြီး နောက်ရက်မှာ တက်လာတဲ့ ပို့ပါ…။ ဒီဆိုဒ်မှာ ကျွန်တော်က စီနီယာ ဂျူနီယာ မခွဲခြားပါ..။ ငါစီနိယာပဲ ငါရေးနေတာ ဘယ်နှစ်ပုဒ်ရှိပြီဆိုတာလည်း မှတ်မထားပါ…။ ဒါပေမဲ့…. အများအမြင်မတော်တဲ့ အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့ တားဆီးတဲ့ အနေနဲ့ ပြန်လှန်ချေပတတ်ပါတယ်…။ သူကြီးလည်းမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်…။ ဂေးလ် ပို့စ်တွေ တက်လာတဲ့ ကိစ္စ …။ အဲဒိတော့ ပို့စ်တက်လာတာကို ကြပ်မတ်ပေးသင့်ပါတယ်…။ ပြီးတော့ စည်းကမ်းနဲ့ မညီညွှတ်ရင် ၀က်ဆိုဒ်ထဲ ဘယ်နှစ်ရက်ပေးမ၀င်ဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်…။ ( တစ်ချို့ကလည်း စမ်းသပ်တဲ့ သဘောနဲ့ စည်းကမ်းကို တစ်စတစ်စ ချိုးဖျက်နေတဲ့ သဘောမျိုး လုပ်နေကြပုံရပါတယ်…။ ကျွန်တော့ အမြင်ပြောကြည့်တာပါ…။ )
ခရမ်းချဉ်သီးချက်လောက်ဘဲ ရေးနေတဲ့ ကျနော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်အသိတရားနဲ့ မိမိကိုယ် မိမိချည်နှောင်ထိန်းချုပ်ကြပါလို့။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
အခုဆိုရင် တံခါးတောင် ပိတ်ထားရတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကြီး လျှော့ခိုင်းတိုင်း လျှော့ထားတာ
ပုဆိုးတောင် ကျွတ်နေပြီဗျ …..
သူကြီးရေ .. စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ ဆို အားမနာပါနဲ့။ အားနာပြီး ” နဲနဲလျှော့ကြပါ” မလုပ်ပါနဲ့။
ပြတ်ပြတ်သားသား သာ ကိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
စေတနာ က စေတနာ ။ စည်းကမ်းက စည်းကမ်းပါ။ စေတနာ ရှိရင် စည်းကမ်းလည်းသိပါ။
ဆဲတာ တစ်ခုထဲသာ မက သူကြီး အားနာပြီး ပိုစ် (၂) ခုထက်ပိုတင်လာ၇င် လည်း ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း အဖိုးတန်စာ ဖြစ်ပါစေ သူကြီး က ၇က်မရွှေ့ပေးဘဲ ဖျက်ချပြစ်သင့်ပါတယ်။ အမြန်သိစေချင်တဲ့ စေတနာရှိရင် Forum မှာ သွားတင် လို့ရတာဘဲ။
သူကြီး လည်း အားနာ တာ “နဲနဲလျှော့ပါ” လို့ဘဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
နောက်တစ်ခု ကတော့ သူကြီး စည်းကမ်းထိန်းဖို့ တပ်ကူလိုနေပြီ။
ပူပါနဲ့ကွယ်.. ဒို့တဂျီး ဥကိုင်မှာ CIA ရော၊ တရုတ်တွေရော၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေရော အများကြီးရှိပါတယ်။ သူက တစ်ခါက သူများပြောဖူးသလိုပဲ တဂျီးဆိုတာ မန့်ရင် မိုးပေါ်ထောင်မမန့်ဘူး၊ တည့်တည့်မန့်တာကွဆိုပြီး အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြန်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ သူဘယ်လောက်တောင် စည်းကမ်းတွေ ကိုင်တဲ့အကြောင်း၊ သူအားနာတာ အားနာချင်လို့နာတာ မဟုတ်ပဲ အားနာတတ်လို့သာ အားနာနေတဲ့အကြောင်း၊ သူမပြတ်သားတာလဲ မပြတ်သားတာမဟုတ်ဘဲ မပြတ်သားနိုင်စရာ အကြောင်းတွေကြောင့်မို့ မပြတ်သားကြောင်း၊ ဆဲတာတွေကလည်း ကြည့်သောသူ မြင်၏ လို့ နှလုံးသွင်းထားနေတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ချော့ချော့မော့မော့လေး လေချိုသွေးနေရတယ်ထင်ပါတယ်ကွယ်။ မတော် သူက ဆဲတဲ့သူတွေကို ဆဲတဲ့အကြောင်းကို မဆဲဖို့ ပြောမှ အဆဲခံနေရမှာလဲ စိုးတာကတစ်ကြောင်း၊ … တစ်ကြောင်း၊ … တစ်ကြောင်း၊ …
ပြောလေကဲလေ၊ မန်းလေပြဲလေတွေကို ဥပေက္ခာပြုထားတယ်ပဲ မြင်မိပါကြောင်း
ကိုအလင်းဆက် နဲ့ .. တပ်မကြီး၇၇ရေ..
ရွာမှာ စုန်းပြူးသောင်းကျန်းတဲ့ကိစ္စ ၀ိုင်းပြောနေကြတဲ့အထဲမှာ …..
ရွာ့ လူရင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ဆြာတို့ ၂ယောက် ကိုလည်း ရန်မဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာ…
စာပေ အယူအဆ တိုက်ပွဲလိုဟာမျိုး ..ရွာထဲ ဖြစ်မလာစေချင်တာ ကျုပ်စေတနာပါဗျာ ….
တယောက်က မော်ဒန် တယောက်က သရုပ်မှန် တခါတခါ တယောက်ရဲ့ အယူအဆက
တယောက်မှာ cross-out ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တာ ကလားဗျ….အမြင်ချင်းတွေမတူတာကို လက်ခံပေးကြပါဗျ..
ကျုပ်တို့ စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကတော့ ဆြာ၂ယောက်စလုံးကို ကျေကျေနပ်နပ်
လက်ခံထားပြီးမှပဲဗျာ နော …..
ပြောရရင်တော့.. ကိုယ့်စာပေါ်ရေးတင်လာတဲ့..ကောမန့်တွေ.. မဖျက်စေလိုပါ..။ ဖျက်လည်းမဖျက်သင့်ပါ..။
ကိုယ့်စာအောက်မှာ ၀င်ရေးတယ် ဆိုကတည်းက..ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ ကိုယ့်စာအပေါ် အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့သဘောမို့.. လာခြင်းကောင်းတာတွေလို့ပဲ.. မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်.။
မန်းရတဲ့.. တဖက်သားခမျာ… ကိုယ့်အတွက်.. အချိန်..ဦးနှောက်သုံးပေးလိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါလား…။
ဒါမှ လစ်ဘရယ် သဂျီး …
သဂျီးနော်.. သိတယ် မလား.. ဟွန့်.. ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လာမပြောနဲ့ ကိုယ့်နယ်မြေမှာ အမှိုက်လာဖွ ရင်တော့ လုံးဝ သည်းမခံဘူး။ ဒါပဲ.. သဂျီးလည်း မချန်ဘူး ဖြတ်သင့်ရင် ဖြတ်ကို ဖြတ်မယ်.. ဒါပဲ.. ဖတ်ခွင့်မပေးရင် ရွာထဲက ထွက်မယ် ဒါပဲ..
ဟိုဘက်က လူတွေကတော့ ညီစေ ညီမယ် …လုပ်နေကြဘီ …
ကီးမြင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေက ကီးပြန်ချနေကြပီ ….
အဲ့တုန်းကတော့ အာဘွားကြီးက အိပ်ပျော်နေပီး …ခုမှ …
သဂျီးကို လာကြိမ်းနေတယ် … …ချိတ်ညစ်ဒလယ်နော်….
ဘာကြောင့်ဒီလို ပြောလဲဆိုတာ သဂျီးသိတယ်။
ဒီတခါတိုက်ပွဲ ဆူး လုံးဝ မပါပဲ နေနေတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်တာ ပါလို့ ၀င်ပြီး ပြောယုံသက်သက်ပဲ။
ရွာထဲမှာ ဆဲပြီးရေးကြတာကို စိတ်ထဲ မကြည်လင်တာကြာပါပြီ….
ရိုးသားမှု အရိပ်ရောင်ရှိလင့်ကစား….. လေးလေးပင်ပင် ရှိအောင် ရေးသည်ဟု ထင်ရောင်မိလင့်ကစား….
ဒါမျိုးတွေက စစ်စရိုက် အာဏာရှင် စရိုက်တွေ….
ဓါးမြတွေ လူဆိုးတွေ ပြုမှုလေ့ ရှိသည့် အလေ့အထများ ဖြစ်သည်…..
သူတို့တွေနဲ့ မတူအောင် နေကြခြင်းသည် မကောင်းပေဘူးလားဗျာ…..
ဟုတ်ကဲ.့ nigimi77 ခင်ဗျား…။ ဆရာ ရေ..။ ကျွန်တော် အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ..လို့ ရေးလိုက်ကတည်းက အမျိုးသမီးတွေ ပါ ၀င် ဖတ်မယ် ဆိုတာ သိပါတယ် ။ အားလုံး ဖတ်မယ် ဆိုတာ သိလို့ လည်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးကို ရှောင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဒီပို့ စ်ကို တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း မန်းထားတဲ့ ထဲက စစ်သားတွေကို အပုပ်ချချင်လို့ …ဆိုတဲ့့ကွန်မန်းတစ်ခုကို ဖတ်ရတာနဲ့တင် တော်တော် နောင်တရခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်က စာပေသမားပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ် ။ တိုက်ခိုက်ရေးသမားမဖြစ်ချင်ပါဘုး။ ဒါကြောင့်လည်း ခုနောက်ပိုင်း မှာ အဲဒီလို စာမျိုး၊ ခေါင်းစဉ်မျိုးကို လက်ရှောင်ခဲ့တာ..အားလုံးအသ်ိပါပဲ။
ဒီပို့ ကို ကျွန်တော် မေ့ထားချင်ပါတယ် ။ ပို့ စ်တင်တာလည်း ကြာပါပြီ။ အခု မှ ကွန်မန်းတွေက ထပ်ဝင်လာပါတယ် ။ ၀င်လာတဲ့ အထဲ..မှာာ ဆ၇ာ nigimi77 မရေးရဲ..ဘူးဆ်ိုတဲ့စာလုံးတွေ..ကို ဘယ်သူရေးသွားးသလဲ.တော့မသိ ။ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရပါတယ် ။
ဒါဖြင့် ကျွန်တော့်ပို့ စ် မှာ အဲဒီ စာလုံးတွေ..ဘယ်သူရေးသွားသလဲ.။ ဘာပဲ.ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ရှောင်ခဲ့့တဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော် ထပ် ဖယ်ရှားချင်ပါတယ်
အဲဒါ အပြစ်လို့မှတ်ရင် ဆရာ့ကို တောင်းပန်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်အမှားပါပဲ..လို့ ။ ကျွန်တော်က ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားတွေကို ဖယ် ဖိုင်းခဲ့ တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်မှားတယ်ပဲ ထားပါ ။
အဲဒီ အမှားအတွက် ဆရာ nigimi77 ကို တောင်းပန်ပါတယ် ။ အားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ် ။ မှား..တယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။
ကျွန်တော့်ဘက်က မှန်နေပေမယ့် တခြားသူရဲ့ အမြင်မှာ မှားနေနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ဒီ ဆိုက်ထဲ..၀င်လာကာစ က ဆိုက်အ၀င် မှာ သင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုမည်..ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သဘောကျလို့ ဝင်လာတာပါ ။
အခု ကျွန်တော် ငြိ်မ်းချမ်းစွာ..ပဲ..ရှိနေချင်ပါတယ် ။
ဆရာက သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိူးပါ…ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားတယ် လို့ ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်. ဥုးသုမင်္ဂလ အမြဲ..အော်နေတဲ့…ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကို လက်ကိုင်ထားပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပို့ စ်အောက်မှာ ( –ီး အယားဖြေတယ်..ဆိုတဲ့စာသားများ လာမန်းသွားတဲ့ ဆရာ nigimi77 ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဆရာရေးသွားတဲ့ စာသားတွေက ရေးသင့်တယ် ထင်ရင် နောက်ကိုလည်း အဲဒီလို စာသားများလာရေးပါဦးလို့လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလို ပို့ စ်မျိုးကို ယောင်လို့ တောင် မရေးတော့ပါဘူး။ )
အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားစွာ….နဲ့ လျှော့ပါတယ်
.ကျွန်တော့ရဲ့အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ ခေါင်းစဉ်ကို ပေးလိုက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အားလုံး ၀င်ဖတ်စေချင်လို့ ကို ပေးလိုက်တာပါ ။
ဒါကို ဆရာ nigimi 77 က ကျွန်တော့်ကို
လိင်ခွဲခြားမှုဝါဒကို နှစ်သက်တဲ့ အစွန်းရောက်သူတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ဆရာ့ကို ကျွန်တော်လေးစားသွားပါတယ် ။
ဆ၇ာနဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီနေရာမှာ နားလည်မှုတွေ လွဲသွားပုံရပါတယ် ။
ဆရာ ထင်သလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ခွင့်ရှိပါတယ် ။
ဘာပဲ.ပြောပြော ဒီ ပို့ စ်ရယ်…ဒီ စကားတွေရယ်က ကျွန်တော့်ကို ပညာပေးပါတယ် ။ သင်ခန်းစာပေးပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ဆရာ nigimi77 ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာ….ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်မယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
ကို အလင်းစက် ။
ကြုံလို့ ပြောတာပါ ။ မကြာသေးခင် အချိန်က ကျွန်တော် မန်းလေးမြို့ ကို
အလုပ်ကိစ္စ တခုနဲ့ သွားခဲ့တယ် ။ ပထမဆုံး ရပ်နားတဲ့ Toll Gate မှာ ၀င်ပြီး
စားသောက်မယ်လုပ်တော့ အဲဒီက ကလေးတွေက ကျွန်တော့်ကို ” ဘောဇိ ”
ဘာသုံးဆောင်ပါမလဲလို့ မေးပါတယ် ။ ပြောရရင် အဲဒီ အသုံးအနှုံးဟာ
ကျွန်တော့်အတွက် အတော့်ကို မွှေးညင်း ထောင်စေပါတယ် ။
ဘယ့်နှယ်…ဘောဇိ တဲ့….. နေရင်းထိုင်ရင်း ဟန်ကိုယ့်ဖို့လုပ်ပြီး နေရမည့်
အဆင်းဘီးတပ် စကားလုံးမျိုးပါ ။
ကျွန်တော် ဆရာ မဟုတ်ပါ ။ စီနီယာ လည်း မဟုတ်ပါ ။ တတ်လို့ ရေးတာလည်း
မဟုတ်ပါ ။ ညဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မိသလောက်ကို ရေးပါတယ် ။
“….၀င်လာတဲ့ အထဲ..မှာာ ဆ၇ာ nigimi77 မရေးရဲ..ဘူးဆ်ိုတဲ့စာလုံးတွေ..ကို ဘယ်သူရေးသွားးသလဲ.တော့မသိ ။ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရပါတယ် ။
ဒါဖြင့် ကျွန်တော့်ပို့ စ် မှာ အဲဒီ စာလုံးတွေ..ဘယ်သူရေးသွားသလဲ.။ …..”
ကျွန်တော် နိဂိမိရေးပါတယ် ။ L ကီးများဖြင့် တီးခတ်ခဲ့ပါတယ် ။
ညဏ်မှီသလောက် သဘောတရားကို ဆွေးနွေးပါမယ်
ဦးစော ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်သလဲ ။
ဘာကြောင့် ညာကြောင့် ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းများ အရ ဒါကြောင့် သတ်တယ်လို့ဆိုကြတယ် ။
ဒါက နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှု ။ သို့ သော် ဒါက ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ လျှောက်လှမ်းချင်နေတဲ့
လျှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အနေအထား တစ်ခုကို တိုက်ရိုက် အကျိုးပြုသလား ဆိုတော့
သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့တောင်မှ အကျိုးမပြုဘူး ။ ဒါက ကျွန်တော့် အမြင် ။
အယုဒ္ဒယမှာ ဘာကြောင့် ဒီတိုင်းထားသလဲ ။ မုန်းတီးစေချင်တယ် ။ နာကြည်းစေချင်တယ် ။
ဒါက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဗမာဆိုရင် မုန်းတီးစေချင်လိမ့်မယ် ။
ဒါပေသိ အချိန်ကာလ အပြောင်းအလဲ တလျှောက်မှာ ခံယူချက်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ် ။
အရေးကြီးတာ ဘာလဲ ဆိုတာ သူတို့အချိန်မှီ သိကြတယ် ။
ဆိုတော့…မမုန်းနဲ့ လို့ပြောစရာမလိုသလို မချစ်နဲ့ လို့ ပြောစရာလဲ မလိုဘူး ။
ဘာလုပ်ရမလဲ ၊ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာက စဉ်းစားရမည့် အပိုင်းဖြစ်လာမယ် ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ တခြားသူတွေ စဉ်းစားသလို စဉ်းစားနိုင်ရဲ့ လား ၊ စဉ်းစားရဲရဲ့ လား
ဥခွံကို ဖောက်ထွက်နိုင်ရဲ့ လား ဆိုတာမျိုး ။
အခု အသက်အရွယ် အထိ နားမလည်နိုင်တာ တခုရှိတယ် ။
သူ့ ကျွန်မခံလို ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ …နိုင်ငံတခုလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ပိုပြီး အင်အားကြီး
ပြည့်စုံတဲ့ ဗြိတိသျှ ကို တိုက်ထုတ် သလို အလွန်တရာ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဂျပန်ကိုလည်း
ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ….သူ့ ကျွန်မခံလိုတဲ့ နိုင်ငံက လက်ရှိ အချိန်အထိ ကိုယ့်ကျွန်ကိုယ်
ပြန်ခံနေကြတာဟာ ဘယ်သော အခါမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ ရုန်းထွက်ဖို့မကြိုးစားရဲတဲ့
ဖိတ်ချင်းဖိတ် ငါ့အိပ်ထဲဖိတ် အတွေးအခေါ်တွေကြောင့်ပါ ။
စကားတွေက သိပ်ရှည်နေပြီ ။
လိုရင်းဗျာ….။ ကျွန်တော်ကနေ မွေးလာမည့် သားသမီး တစ်ယောက်က ကိုအလင်းစက်
ပြောတဲ့ လူတွေရဲ့ နေရာကို ရောက်နေပြီလို့ ထားကြည့်ပါ ။
ခင်ဗျား မျိုးဆက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု အ၀၀ဟာ ခင်ဗျား အပေါ်မှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိနေတယ် ။
ကျွန်တော့် သဘောကတော့ လူတန်းစား နှစ်ရပ် ကွဲပြားသွားစေတဲ့ အယူအဆမျိုးဟာ
ကိုယ်ကိုတိုင်က ပေါက်လိုက်ပြီး အများရှေ့ မှာ…နံလိုက်တာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ။
သားဆိုး သမီးဆိုး ဖြစ်ဖြစ် သားကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်ဖြစ် မိဘက မွေးလာတာဖြစ်လို့ 
မိဘဟာလဲ ပြည်သူတွေပါပဲ ။ ပြည်သူက မွေးဖွားလာတဲ့ စစ်သားတွေ စရိုက်ဆိုးတာ
ပြည်သူတွေက စရိုက်ဆိုးလို့ ပါပဲ ။ ဒါကို အတိတ်မေ့သလို ရွှေပျောက်သလိုလုပ်ကြတယ် ။
ဒါကြောင့် နိဂိမိ ဆဲတယ် ။ မသင့်တော်ရင် အဆဲပြင်မယ် ။
ကိုယ်မွေးကိုယ်သား စစ်သားဖြစ်လာရင် မုဒိမ်းကောင် မဖြစ်အောင်ထိန်း ။
ကိုယ်မွေး ကိုယ့်သမီး လိုဘမီး တက်လာရင် စစ်ဗိုလ်နဲ့ ပဲ ပေးစားပစ်လိုက်မယ်
မဖြစ်အောင် ကိုယ်ကိုတိုင်ထိန်း ။
ငါ့လခွီး ဗိုလ်ပြုတ်ကိုတောင် ပြုတ်ပြီး သေခါနီး အထိ ဦးညွတ်ပြီး ဗိုလ်ကြီး ခေါ်နေကြတဲ့
ဒီပြည်သူပြည်သားတွေက တုံးအောက်က ဖားတွေလို အုံးအွမ် အုံးအွမ်နဲ့။
သူကြီးရေ ကျနော်ထင်တာ သေချာသွားပြီ။
အဲဒီလူ တမင် လာဖွပြီး ရွာထဲကလူတွေကို သဘောထားကွဲလွဲအောင်လုပ်နေတာ။
သူ့ကိုဘာပြောပြော ခံ နေတာကိုက မရိုးသားဘူး။
သူကြီးရဲ့ ပြတ်သားသောအရေးယူမှုတခု ကလည်း အရေးပါမယ်ထင်တာပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒါကို စဉ်းစားနေတာ ဆရာသစ်ရေ .
ဘာတဲ့ Mild Game ဆိုလားပဲ …
ကိုယ့်ထဲ ပေးလာတဲ့ကော်မင်းကိုလဲ မဖျက်နဲ့။
ဒို့သူကြီးက အချော့တော့လဲ အကောင်းသား။
ဘော်လီဘောဆိုတာ အနုပညာပါ ….. ဆိုလား
ပြောမရတော့လည်း လျှော့ခိုင်းနေပါရောလား။ နည်းနည်းလျှော့လို့ ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး သဂျီးရဲ့။ အကုန်လျှော့လို့သာ ပြောရမှာ။ တစ်ခါတလေ အရင်ဘ၀ကများ အမုန်းတွေရှိနေသလားမှတ်ရ။ တစ်ဖက်သတ်ကြီး လိုက်ဖဲ့နေတာရှိသေးတယ်။
ကျနော် ဂဇက်ရွာထဲမှာ စာဝင်ဝင်ဖတ်တာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာ၊ ကွန်းမန့်တွေဖတ်ရတာ သဘောလဲကျတယ်၊ လူမျိုးစုံ၊ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရေးကြတာဆိုတော့ ရသစုံလို့လည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ရွာသားတွေ စိတ်ဝမ်းကွဲမယ့် အကြောင်းအရာမျိုးတော့ မဖတ်ချင်ဘူးဗျာ၊ စည်လုံးညီညွတ်မှု့ရှိမှ ကျနော်တို့ ဂဇက်ရွာကြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာပါဗျာ……
ရွာထဲမှာ ရွာသူားအားလုံး ကျေးဇူးတွေပတ်တင်နေပါတယ်..
တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး နားလည်းမှုနှင့် လေးစားမှုကို တန်ဖိုးထားပြီး
မန့်နိုင် ဆက်ဆံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာပါ..
နေဦး.. ရေးဖို့ ကျန်သွားလို့ဘာ..
ရွာသူားချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် အချွန်တွေ၊ အငြောင့်တွေ ရွာနာတဲ့ စာမျိုးတွေရေးနေတဲ့
သူတွေဆိုရင်တော့ မလျှော့သော ဇွဲနဲ့ဆက်လက်ဆဲနေဦးမည်။
ဆရာနိဂိမိရေ.. ကျွန်တော် အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး..နောက်ထပ် ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်ကို ဆရာ ခွင့်လွတ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ခွင့်လွတ်လိုက်ပါပြီ။
ကျွန်တော် ..မှားတယ်ပဲ..သတ်မှတ်ပါတယ် ။
ဆရာလည်း ဆ၇ာ မမှားဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် ။ မှား..မမှား ဆိုတာကို သိချင်ရင် အဲဒီပို့ စ်မှာပါတဲ့ဆရာ့ ကွန်မန်းကို စာရွက်နဲ့ ထုတ်ယူပြီး..တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြကြည့်ရင် သိမယ် ထင်တယ် ။
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ဆရာ..inz@ghi ပြောတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ချင်း အယူအဆတွေ တိုက်ခိုက်နေတယ်…လို့ ထင်နေတာ.ကို .တွေ့ ရပါတယ် ။
ဆရာတို့ ကို ကျွန်တော့်အသေအချာပြောခဲ့ပါ့မယ် ။ အသေအချာပြောခဲ့ပါမယ်။
စကားလုံး..အသုံးပါ။ လ..ရေး လုံးကြီးတင် ဆန်ခတ်…ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။
စကားလုံးက အပေါ်ယံ အလွှာ. ။အယူအဆက အနှစ်သာရပါ ။
အနှစ် ( အယူအဆ ) ကို ကျွန်တော် မတိုက်ခိုက်ပါဘူး။ မဖယ်ရှား ပါဘူး။
လူတွေ..တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အယူအဆ ကွဲလွဲစွာ ယူဆ ခွင့်ရှိကြောင်း ကျွန်တော့် စာပေဆောင်းပါးများမှာ.. ရေးခဲ့ပါတယ် ။ သိကြမှာပါ။
ဆရာ နိဂိမိ ရဲ့ အယူအဆ က ကျွန်တော့်အယူအဆ နဲ့ကွဲလွဲသည်ဖြစ်စေ…တူညီသည်ဖြစ်စေ..ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
ြိငိမ်ချမ်းစွာ..ရပ်တည် နေနိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော့်ဖယ်ခိုင်းခဲ့ တာက စကားလုံးပါ ။ ထပ်ပြောပါ့မယ်။ စကားလုံးပါ ။ လ ရေး လုံးကြီးတင် ဆန်ခတ်..၀စ္စပေါက်..ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ..ပါ ။
ဆရာ့ အယူအဆတွေက်ိုကျွန်တော်..ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။
အားလုံးကို ညီအစ်ကို မောင်နှမ လို မေတ္တာ နဲ့ ပဲ..ဆက်ဆံချင်ပါတယ် ။
ဒီရွာထဲ မကြားဝန့်မနာသာ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်
( လူသူတော်ကောင်းတွေ မပြောတဲ့ စကားကို ပြောသူအဖြစ် ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် မှတ်ယူပါတယ် )
ကျုပ်ကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဲ ဆဲတာပါ
ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အဘက စစ်ဗိုလ်တွေဖြစ်မယ်
( ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ဘဲဆဲဆဲ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းဟာ မယဉ်ကျေးတဲ့စကားပါ )
ကျုပ်မိန်းမက ကျုပ်ကို တောက်တဲ့လောက် အသုံးမကျတဲ့သူ ဆိုပြီးတော့
ကျုပ်လည်း အစွမ်းရှိသ၍ လျှာကြွေးတာဘဲ
သဂျီး။ ရွာထဲ ၀င်မလို့ ခြေလှမ်းတုန်းရှိသေးတယ်။ ဆူဆူညံညံအသံတွေ ကြားနေရလို့ ကြောက်တောင် ကြောက်လာပြီ။ အသစ်တွေကိုတော့ ကြိုဆိုသေး မဟုတ်လား။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် သဂျီးက အင်း….ဟုတ်တယ် လို့ ပြောတယ်ပဲ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပြီး သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
သဂျီး။ Post တင်ချင်ရင် Tag မှာ ကော်မာခံရတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်။ သိပ်မရှင်းဘူး။ တင်မယ့် Post တွေက သိပ်များလွန်းလို့ မေးကြည့်တာ။ ဟီး…ဟီး…..။
ဝေး … ကြိုဆိုပါတယ် ။။ တင်မဲ့ ပို့စ်တွေ အများကြီးဆိုလို့ .. တနေ့ နှစ်ပုဒ်နော် ..လောဘ မကြီးရဘူး.. :grin:
ကိုထူးဆန်း….ကြိုဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ပြာက နောက်တာပါ။ Post မတင်နိုင်သေးပါဘူး။
စာတစ်ကြောင်းရေးဖို့ အရမ်းခက်မှန်းသိပါတယ်။ လောဘလဲ မကြီးပါဘူး။